दलान नेपाल : किन हुदैन एकिकरण ?
किन हुदैन एकिकरण ?
at 1:11 AM Posted by Dalan
बहुचर्चीत तीन मधेशी पार्टी विचको एकिकरण अन्नतह नहुने भएपछि तीनै पार्टीका नेतृत्वहरु आ आफना ढंगले पार्टीलाई क्रियाशिल बनाउन तर्फ लागेका छन । निर्वाचनमा नराम्ररी पराजय व्योहोरे पछि तीनै नेतृत्वले जसरी पनि एकिकरण गरेर देखाउने दाबी गर्दै आएका थिए । हुनत निर्वाचन पुर्व पनि एकिकरणको प्रयास यी तीन लगायत विभिन्न मधेशी पार्टीहरु विच नभएको होईन । तर प्रश्न उठछ, यत्रो लामो छलफल र सबैले प्रतिबद्धता जनाउदा जनाउदै पनि आखिर किन एकिकरण सफल हुन सकिरहेका छैन । एकिकरणको प्रक्रियामा सुरु देखि नै सहभागी केही नेताहरुले अनौपचारिक रुपमा बताउने गरेको तथ्यलाई केलाउने हो एकिकरण नहुनुमा प्रमुख तीन ओटा कारणहरु देखिन्छ । पहिलो सबैमा नेतृत्व आफैले गर्न पाउनु पर्ने स्वार्थ, दास्रो अन्तरपार्टी द्धन्द र तेस्रो भारतीय पक्षको एकिकरणको सन्दर्भमा गलत मुल्यांकन ।
नेतृत्व स्वार्थ र अन्तरपार्टी द्धन्द
एकिकरणको अगुवाई सुरु देखि नै तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले गरिरहेका छन । पहिलो संविधानसभाको विघटनको केही महिना पुर्व ठाकुर नेतृत्वको तमलोपाको केन्द्रिय कार्यसमितीको बैठकले मधेशमा सशक्क्त पार्टीको निर्माणको लागी मधेश केन्द्रित सबै दलहरुसंग छलफल अघि वढाउने निर्णय गरेपछि एकिकरणको श्रीगणेश भएको थियो । त्यसलगत्तै ठाकुरले आफैले विभिन्न पार्टीका अध्यक्षहरु संग अनौपचारिक छलफल थाले । तर अन्य मधेशी पार्टी औपचारिक पत्रको माग गरेपछि ठाकुरले हृदेश त्रिपाठीको नेतृत्वमा एउटा वार्ता टोली गठन गरेर एकिकरणको छलफललाई औपचारिक रुप दिए । त्यसपछि त्रिपाठी नेतृत्वको टोलीले मुख्य गरी विजय गच्छदार र उपेन्द्र यादवसंग छलफल अघि वढाएका थिए ।
साथै सदभावना लगायत अन्य साना पार्टीहरुसंग पनि छलफल हुदै थियो । उपेन्द्र यादव संगको छलफल अली वढी चर्चामा आयो र यादवको पार्टी फोरम नेपालसंग एकिकरण गर्ने सैद्धान्तिक सहमती हुन लाग्यो भनेर सार्वजनिक हुन थाल्यो । उता राजेन्द्र महतो संग ठाकुर गच्छदारको सम्बन्ध विग्रने क्रम चल्दै थिए । महतोले ठाकुर र गच्छदारले मधेशलाई ५ टुक्रामा वाडने सहमती गरेको भन्दै सार्वजनिक आलोचना गर्न सुरु गरिसकेका थिए । त्यही क्रममा महतोले तत्कालिन मधेशी मोर्चा विरुद्ध र ठाकुर र गच्छदारलाई गद्धारको संज्ञा दिदै भाषण गरे ।
यता यादव नेतृवको फोरम नेपालले महासचिव राम सहाय यादव नेतृत्वको टोलीलाई तमलोपाको वार्ताटोली त्रिपाठी संग वार्ता गर्न लगाएका थिए । उक्त वार्ता प्रक्रियामा सहभागी एक नेताका अनुसार छलफलकै क्रममा त्रिपाठीले फोरम नेपालका महासचिव रामसहाय यादवलाई एक दिन नराम्ररी गिज्जयाई दिए । त्यसपछि फोरम नेपालका नेताहरु वार्ता गर्न आउनै छाडि दिए । फोरम नेपालसंग वार्ता अवरुद्ध भएपछि ठाकुरले उपेन्द्र यादवसंग आफै भेट गरेर वार्ता अघि वढाउन आग्रह गरेपछि यादवले आफुहरु त्रिपाठीसंग वार्ता नगर्ने बताए । त्यसपछि ठाकुरले यादवलाई सवेन्द्रनाथ शुक्लासंग वार्ता गर्न भने । त्यसपछि ठाकुरले पार्टीमा कसैसंग सल्लाह नगर्दै पहिला वार्ता टोलीलाई समेत कुनै जानकारी नदिई शुक्लाको नेतृत्वमा अर्को वार्ता टोली गठन गरेर वार्ता गर्न भने । शुक्ला अचानक वार्ताटोली लिएर सक्रिय भएपछि तमलोपामा त्रिपाठी लगायतका नेताहरु चितपटको अवस्थामा पुगे । यसरी तमलोपामा भित्र एकिकरणको सन्दर्भमा तीव्र आन्त्रिक द्धन्द सुरु भयो । यता शुक्लाले उपेन्द्र यादवसंग वार्ता नगर्दै त्रिपाठी फेरी आफनो नेतृत्वको वार्ता टोली सक्रिय पारेर विजय गच्छदारसंग वार्ता गर्न पुगे । जुन आफैमा वडो अच्चमको घटना थियो । किनकी गच्छदारले सुरुले आफु ठाकुरको नेतृत्व स्विकार्न तयार नरहेको प्रस्ट पारीसकेका थिए ।
यता फोरम नेपालले पनि सुक्लासामु ठाकुर वृद्ध र स्वाथ्य दुवै दृष्टिकोणले नेतृत्व भन्द्या पनि सम्मानित पात्र भएकाले उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा ठाकुरलाई वरु सर्वमान्य नेताको रुपमा अघि सारेका थिए । यता ठाकुरकै भरोसामा आफनो राजनिती पुर्नजिवित गरेका सुक्ला ठाकुर वाहेक अरुको नेतृत्वमा एकिकृत पार्टी बन्नै नसक्ने तर्क अघि सार्दै थिए । यसरी यी पार्टीहरु विच नेतृत्व कसले लिनेमा तीव्र विवाद देखेपछि तत्काल एकिकरणका लागी गरिएको पहल खासै अघि वढेन । त्यसपछि ठाकुरले आफैले सबै अध्यक्षहरुलाइ निम्तो दिएर चियापानमा डाके । तर सबैले उक्तचियापानमा गए ठाकुर थप सबल देखिने भन्द्यै यादव, गच्छदार र महतोले उक्त चियापानमा सहभागी जनाएनन ।
त्यसपछि ठाकुर पनि एकिकरण भन्दा आन्तरिक रुपमा निर्वाचन तर्फ केन्द्रित हुन थाले । र त्यही विचमा फेरी राजेन्द्र महतो संग महन्थ ठाकुरको एउटा गोप्य बैठक भयो एकिकरणकै सन्दर्भमा । उक्त प्रयास तमलोपा भित्रैका केही अगुवा नेताहरुले गरेका थिए । निर्वाचनमा कम से कम एउटा एकिकरणको सन्देश जाओस भनेर । त्यही सन्दर्भमा तमलोपाका अपाध्यक्ष बृषचन्द्र लालको घरमा ठाकुर र महतोको बैठक भयो । उक्त बैठकमा महतोले ठाकुरलाई तपाईको स्वास्थ्य पनि राम्रो नरहेको र उमेर पनि अली वढी भएको भन्दै आफलाई अध्यक्ष बनाई दिन प्रस्ताव गरे । उक्त प्रस्तावलाई ठाकुर आफैले ठाडै अस्वीकार गरेर । आफुले जसरी भए पनि आखिर पार्टी चलाईनै रहेको जवाफ महतोलाई फर्काएका थिए । त्यसपछि महतो र ठाकुरको उक्त बैठक टुडिगएको थियो । यो बैठकमा निर्वाचनको नोमीनेशन भन्द्या केही दिन पुर्व मात्रै भएको थियो । त्यसपछि सबै पार्टीहरु आफनो तालले निर्वाचनमा सहभागी हुन मधेश झरे ।
निर्वाचनमा परिणम हाथ लागेपछि सबै अध्यक्षहरुले बुझाईमा मधेशी पार्टीहरु धरमराउन पुगे । निर्वाचनको पुरै नतिजा आएपछि सबै आकंलन भए पश्चात मत प्रतिशत नघटेको वरु मधेशी पार्टीको मत तीव्र विभाजित भएको देखियो । त्यसपछि फेरी सबै पार्टीहरु विच एकिकरणको प्रसंग उठयो । र फेरी त्यसको केन्द्रमा ठाकुर नै देखिन थाले । यही विच समानुपातिकको नामावली छनौटमा मधेशी पार्टीहरुमा भएको तीव्र व्यापीकरणले ठुलो असन्तोष पैदा गरिसकेको थियो । सबै अध्यक्षहरुको विरुद्धमा मोर्चावन्दी भईसकेको थियो । फोरम नेपालमा त यादवले एकिकरण गरे पार्टी भित्र ठुलो विद्रोह गर्ने चेतावनी आयो भने सदभावनामा पनि गजेन्द्र नारायणसिंहलाई महतोले बेचीरहेको भन्दै ठाउठाउमा गोप्य बैठकहरु हुन थाले । यता तमलोपामा ठाकुरले सुक्लालाई विशेष महत्व दिएको भन्दै त्रिपाठी लगायतका अन्य वरिष्ट नेताहरु आन्तरिक रुपमा तीव्र असन्तुष्ट थिए । त्यसमा पनि फेरी एकिकरणको सन्दर्भमा कोई पनि नेतृत्वको सवालमा लचक देखिएका थिएन ।
भारतको गलत मुल्यांकन
यी तीन मधेशी पार्टीहरु विचको एकिकरणको सन्दर्भमा भारतीय भुमिको पनि खुवै आलोचना भएको सुनियो । सबैले भारतीय पक्ष जसरी भए पनि ठाकुरकै नेतृत्वमा सबै मधेशी नेताहरुलाई गोलबन्ध गर्न खाजेको भन्दै असन्तुष्टी व्यक्त गर्न थाले । सवै भन्द्या पहिला असन्तुष्ट भए गच्छदार जसकार कारण पछिल्लो समयमा उनले चाहेको जती केही गर्न पनि सकेन । त्यसपछि महतो हुदै उपेन्द्र यादव समेत यसप्रति असन्तुष्ट देखिए । तर महतो र यादवले मौन रुपमा भारतको मुल्यांकन सिरोधार्य गरे जस्तो कमेडीको भुमिकामा देख्न थाले । त्यसै गरी अन्य साना मधेशी पार्टीहरुका अध्यक्ष पनि यी तथ्यको आलोचन गर्दै ठाकुरसंगको एकिकरण प्रक्रियावाट अलग भए ।
जानकारहरुको बुझाईमा भारतीय पक्षले यसका लागी उपेन्द्र यादव र महतोलाई ठुलै दबाब दिएपछि मात्रै यी नेताहरु यती सम्मको वार्ता प्रक्रियामा समेत सहभागी थिए । कतिपयको बुझाई भारतीय पक्षले खाली ठाकुरलाई महत्व दिन थाले पछि अरु मधेशी नेताहरु आफनो भविष्यका लागी समेत चिन्नतीत हुन थाले । र आन्तरिक रुपमा धेरै खिचडीहरु पक्न थाल्यो । जसले अन्नतह भारतीय चाहनाको अनुरुपको यो एकिकरण प्रक्रिया कुनै पनि हालतमा अघि वढन सक्ने अवस्थामा छैन ।
Unknown November 28, 2014 at 2:44 PM